B2B Vatengesi Vanowana Kubudirira Nezviri Kushambadzira | Martech Zone
Gore rega rega, iyo huwandu hwemari yakaiswa mukati content marketing mazano anoita kunge ari kuwedzera. Kunyanya, B2B yemukati vatengesi vanotsvaga kuwana chiziviso cherudzi, inotungamira chizvarwa, vatengi kutenga uye kuvimbika, webhusaiti traffic, uye kutengesa kuburikidza ne kwavo zvemukati zvisikwa. Sevashambadziri vanowana savvy nemazano avanoshandisa kugovera zvirimo, ndedzipi nzira, mapuratifomu, uye mafambiro ari kuunganidza mabhenefiti akakurisa? LinkedIn kubatana pamwe KushambadziraProf uye Content Marketing Institute kupindura uyu mubvunzo, uye kupaza nzvimbo yazvino.
Dhata inoratidza kuti 73% yevatengesi vari kugadzira zvimwe zvirimo ipapo zvavakaita gore rapfuura uye ivo vanobudirira kwazvo vashambadzi vari kusimudzira zvirimo zvavo pa7 social media mapuratifomu, maringe ne4 chete anoshandiswa nezvikwata zvisinganyanyo shanda. Infographics iri kuratidza imwe yemaitiro akabudirira kwazvo, ichikura mukuzivikanwa ne51% yevatengesi veB2B gore rino, kukwira 13% kubva pagore rapfuura. 91% yevatengesi veB2B vanosarudza kusimudzira zvirimo paLinkedIn, ichiteverwa neTwitter pa85%. Tsvaga kuti ndeapi magwaro ekutengesa matekiniki B2B vatengesi vari kushandisa zvakanyanya uye izvo zvavanotenda kuti ndizvo zvinobudirira mune infographic pazasi.
Tags: b2b zvemukati zvekushambadzirab2b dhatab2b infographicContent MarketinginfographicMarketing
Nov 14, 2013 pa9: 48AM
Kelsey, data hombe pano !! Yakanyanya kudzidzisa posvo yekubatsira vamwe vashambadzi kuona izvo zviri pamusoro pevashambadzi vekirasi vari kuita zvinobudirira !!
Mbudzi 14, 2013 na8: 36 PM
Ndatenda zvikuru! Unofara iwe unofarira chinyorwa uye graphic.